Okuzenzakalelayo Capsule Metage ekulinganisweni Machine (CMC)
Esikhathini ukukhiqizwa amaphilisi, ekushintshashintsheni capsule izinsimbi ngokuvamile kuzothathwa ukuthanda abantu, umshini, impahla, izindlela kanye imvelo. Ezinye amaphilisi lapho kutholakala khona insiza ezwakalisa ingozi eliphezulu ku izinga okuyinto kumele lithathwe ngokuthi "imikhiqizo okuyingozi". Indlela yokubhekana imikhiqizo eminingi okuyingozi uhlale ikhanda uMnyango ukulawula izinga kanti umnyango zokukhiqiza.
CMC (okuzenzakalelayo Capsule Metage ekulinganisweni Machine) kulinganisa amaphilisi ngamunye ngamunye, ekulinganisweni wabayisa kwabahle futhi siyishiya ngokuvumelana predetermined isisindo ububanzi. Isebenza kahle nge ukusebenza kahle eliphezulu, kunciphise nezindleko futhi kusiza ukwenza ngcono izinga capsule.
Phakathi naleso sikhathi, ukusebenza kahle zokusebenza CMC uchungechunge zingandiswa ngokungenamkhawulo ukusebenza imodi yayo zokudala - "extendable iyunithi isakhiwo" kanye "angenamkhawulo uxhumano parallel". Ngakho-ke, kungaba kuhlanganiswe kunoma umshini capsule ukugcwaliswa sikucabangisise zonke capsule kusukela ukukhiqizwa.
Amaphilisi 400 / iminithi
800 amaphilisi / iminithi
1200 amaphilisi / iminithi
n * amaphilisi 400 / iminithi
Kusebenza Capsule Usayizi
Ukucabangisisa Ngethuba Lokungenela Ibanga
Olandelayo: Capsule Checkweigher CMC-800
Esinembile Capsule Ukucabangisisa Ngethuba Lokungenela
Okuzenzakalelayo Capsule ekulinganisweni Machine
Capsule Ukuhlolwa Kudivayisi
Capsule Ukuhlolwa Machine
Capsule Ukuhlelwa Machine
Capsule Ukucabangisisa Ngethuba Lokungenela Machine
Capsule Isisindo Checker
Capsule Isisindo Ihlola Machine
Capsule Isisindo Control
Capsule Isisindo Ukuhlolwa
High Speed ​​Capsule Checkweigher
odonsa phambili Capsule Checkweigher
Pharmaceutical Capsule Izinsiza kusebenza